Olee otú Igosi Toshiba Canvio Data Recovery
> Resource> Naghachi> Olee otú iji Igosi Toshiba Canvio Data Recovery
Enwere m ike Naghachi faịlụ site Toshiba Canvio mpụga ike mbanye?
M ehichapụ a nchekwa nke ụfọdụ dị mkpa ezinụlọ vidiyo si na m 500GB Toshiba Canvio USB 3.0 obere ike mbanye dị nnọọ ugbu a. Ọ bụ m kpatara na emeghị m ka eme ka ọ bụla ndabere nke ha. Ugbu a, m dị nnọọ chọrọ mara bụ na ọ ka na kwe m omume na-ehichapụ videos azụ m Toshiba Canvio draịvụ ike? Ekele.
Data na gị Toshiba Canvio mpụga ike mbanye nwere ike furu efu ruru mberede ma ọ bụ kpachaara anya nhichapụ, ụgbọala formatting, ụgbọala n'ụzọ ezi uche mebiri emebi, usoro njehie ma ọ bụ nje agha. Ihe bụ isi nkweta nke furu efu data na gị Toshiba Canvio mpụga ike mbanye bụ na ọ nwere ike omume-natara dị ka ogologo oge ọ bụghị na a overwritten site ọhụrụ data na ngwaọrụ gị, n'ihi na ọ bụ naanị ghọtara dị ka keerughi data site usoro.
Ya mere, na-agbake furu efu, ehichapụ, formatted, emerụ ma ọ bụ ọbụna mebiri emebi faịlụ site na gị Toshiba Canvio mpụga ike mbanye, ị nwere ike na-agbalị Wondershare Data Recovery. Nke a oke itunanya mere Toshiba Canvio data mgbake omume bụ ike naghachi nile di iche iche nke faịlụ site na gị Toshiba Canvio mpụga ike mbanye, gụnyere videos, photos, akwụkwọ, ọdịyo faịlụ, wdg E wezụga na, ọ bụrụ na gị Toshiba Canvio mpụga ike mbanye na-adịghị ahụ mebiri emebi, a mmemme mgbe ike iji weghachi gị furu efu data.
Ị nwere ike nweta a ikpe mbipute naghachi data si Toshiba Canvio mpụga ike mbanye ugbu a. Ugbu usoro ihe omume dị dakọtara na niile Toshiba Canvio usoro mpụga ike draịva.
Usoro Toshiba Canvio Data Recovery na 3 Nzọụkwụ
Aga m agbalị weghachi faịlụ site Toshiba Canvio ike mbanye site na iji Windows version nke Wondershare Data Recovery, nke nwere yiri arụmọrụ na na na Mac version.
Nzọụkwụ 1 Họrọ mgbake mode naghachi faịlụ site na Toshiba Canvio mpụga ike mbanye
Dị nnọọ ka ị pụrụ ịhụ site oyiyi n'okpuru, a usoro nwere 3 mgbake ụdịdị n'ihi na ị na ịhọrọ site na mgbe launching ya na kọmputa gị.
Naghachi ehichapụ, formatted ma ọ bụ merụọ faịlụ site na gị Toshiba Canvio mpụga ike mbanye, ị nwere ike họrọ "Echefuola File Iweghachite" mode na-amalite.
Nzọụkwụ 2 iṅomi gị Toshiba Canvio mpụga ike mbanye
Ị na mkpa iji họrọ mbanye akwụkwọ ozi maka gị Toshiba Canvio mpụga ike mbanye na iti on "Malite" button na-amalite ịgụ isiokwu faịlụ na ya.
Ọ bụrụ na ị chọrọ iji naghachi data si a formatted Toshiba Canvio mpụga ike mbanye, ị nwere ike họrọ "Kwado Deep iṅomi" nhọrọ kwa.
Cheta na: Biko hụ na gị na Toshiba Canvio ike mbanye nwere ike ọma ejikọrọ na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 3 Weghachi faịlụ site na Toshiba Canvio mpụga ike mbanye
Mgbe scanning dị n'elu, hụrụ faịlụ gị Toshiba Canvio mbanye ga-egosipụta na window. Ị nwere ike ele aha ha elele ma furu efu faịlụ gị Toshiba Canvio mbanye nwere ike natara ma ọ bụ.
Mgbe ahụ, ị ​​dị nnọọ mkpa ka akara faịlụ na ị chọrọ iji weghachi na pịa "Naghachi" na-azọpụta ha gị na kọmputa.
Cheta na: Biko adịghị azọpụta ha azụ gị Toshiba Canvio ụgbọala ozugbo iji zere data overwritten.